Sheath Gawaarida-Faaruqinta Shiinaha ee Isticmaalka Isticmaalka Hal-warshad iyo soosaarayaasha | Kangyuan
•Xalliyaan dhibaatooyinka dhaqaaqa dhagaxa uric iyo dib u qulqulka gebi ahaanba, Cadaadiska xun, waxay ka fogaan kartaa dib u soo celinta dhagaxa, ka hortagtaa dhaqaaqa dhagaxa oo ka saar dhagaxa si wax ku ool ah.
•Iska yaree cadaadiska sare ee miskaha kelyaha si wax ku ool ah, waraabka Qaaradaha inta u dhexeysa nuugista, waxay sameyn kartaa wareegga dareeraha oo aan kala go 'lahayn si loo yareeyo cadaadiska sare ee miskaha kelyaha si wax ku ool ah.
•Waxay kahortagi kartaa dhiigbaxa si aad uhesho aragti saafi ah inta lagu gudajiro nidaamka qaliinka Waraabka iyo nuugista joogtada ah, waxay nadiifin kartaa malaxda, xinjirowga dhiiga iyo quruurux, waxay qaliinka ku haysaa aragti cad, waxay xaqiijinaysaa amniga qalliinka, waxayna gaabin kartaa waqtiga qalliinka.
•Kordhi adkaynta marinka marinka kaadi mareenka si wax ku ool ah si loo hubiyo in howlgalka si habsami leh loo qabtay, Naqshadeynta qalabka wax lagu duubo oo leh AQ hydrophilic dahaarka leh ayaa balaarin kara adkeynta marinka marinka kaadi mareenka si wax ku ool ah.
•Galka iyo fidinta caarada waa AQ hydrophilic dahaarka leh. Dhumucda dusha sare ee hydrophilic ee sheygan waa 0.03mm oo keliya. COF waa celcelis ahaan 0.050 tijaabo frithion soo noqnoqda. Saameyntu aad ayey uga badan tahay waxyaabaha la midka ah.
•Marinka nuugista cadaadiska xun wuxuu ku xirnaan karaa tuubbada hawada aaladda qalabka nuugista ama tuubbada hawo-qaadashada ee isku dhafan.
•Qalabka silikoon ee silsiladda, si sahlan loo shaqeyo.
•Way fududahay oo way fududahay in la soo wada uruuriyo isku-xidhka tuubada galka iyo isku-xidhka tuubada ballaarinta.
•Daloolinta xakamaynta cadaadiska xun, si wax ku ool ah u habeysa cadaadiska nuugista.
•Jirka tuubada ayaa lagu calaamadeeyay miisaanka, midabku waa cad yahay waana la kala saari karaa. Waxay ka caawin kartaa dhakhtarka inuu si toos ah oo ku habboon ugu xukumo masaafada u dhexeysa galka iyo kaadi mareenka.
•Dusha sare ee jirka tuubada waxaa ku daboolan AQ hydrophilic daahan, taas oo siman, khilaafku waa yar yahay, celceliska qiimaha isku dhaca COF waa 0.050, waana fududahay in la ballaariyo lumenka iyadoo loo marayo qeybta cidhiidhiga ah, yareynta dhaawaca iyo xanuunka.
•Ku xir tuubada ballaarinta si habsami leh.
•Caarada guska waa siman tahay si looga fogaado dhaawaca kaadi mareenka.
•Caarada dirator-ku waa AQ hydrophilic dahaarka leh. Naqshadeynta ayaa ah cajalad duuban. Waxay u kala bixi kartaa si tartiib tartiib ah iyada oo loo marayo kala-jajabinta iyo xoqidda si loo sameeyo marinno qalliin oo dhammaystiran oo joogto ah, oo fududahay in lagu shaqeeyo ureerkoobka jilicsan, ilaaliya kaadi-mareenka inta lagu jiro qalabka is-weydaarsiga ee soo noqnoqda inta lagu jiro ureteroscopy.
Hore: Kateetarka nuugista
Xiga: Tube Caloosha Silicone
galkeeda gelitaanka nuugista-daadgureynta
Dharka go'doominta caafimaadka
Maskaxda Laryngeal oo la xoojiyay
Qalabka Kaadida Qalitaanka Urethral ee La Tuuri Karo